तपाइँको डेस्कटपलाई स्क्रीनकेपचर रेकर्ड गर्नुहोस् लिनक्सबाट
नयाँ सुविधाहरू मध्ये एक समावेश छ जीनोम-शेल कुञ्जीहरूको साधारण संयोजनको साथ हाम्रो डेस्कटप रेकर्डिंगको सम्भावना हो। मा जीनोम ३ हामीसँग यो विकल्प छैन, तर एक प्रयोगकर्ता Gnome-look एक सरल स्क्रिप्ट सिर्जना गरेको छ जुन प्रयोग गरेर यस कार्यलाई सजिलो पार्दछ ffmpeg.
म यसलाई कसरी चलाउने?
हामीले गर्न सक्ने पहिलो कुरा भनेको यसबाट स्क्रिप्ट डाउनलोड गर्नु हो यो लिङ्क र हामी भित्र जे छ सबै बाहिर निकाल्छौं। स्क्रिप्ट चलाउन हामीसँग केही प्याकेजहरू स्थापना भएको हुनुपर्दछ, त्यसैले हामी टर्मिनल खोल्छौं र राख्छौं।
तपाईंले प्रयोग गर्ने वितरणमा निर्भर गर्दै, यी प्याकेजहरू केहि पहिल्यै स्थापित भइसकेको हुन सक्छ।
पछि, कन्सोल आफैंबाट, यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने, फाइलहरू कहाँ झिकिएको फोल्डर पहुँच गर्नुहोस् र कार्यान्वयन गर्नुहोस्:
र हामीले यो केहि प्राप्त गर्नु पर्छ:
यदि सबै कुरा राम्रोसँग स्थापना भयो भने हामी यस्तो झ्याल प्राप्त गर्नेछौं:
स्क्रिप्टमा सीधा पहुँच डेस्कटपमा सिर्जना हुनेछ, जुन हामी कार्यान्वयन गर्छौं र यो बाहिर आउँछ:
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यसले मेरो मोनिटरमा रिजोलुसन पत्ता लगाएको छ 1024 × 768 y विकल्प हो जुन डिफल्टद्वारा चयन गरिएको हो। अवश्य पनि हामी आफूले चाहेको उपायहरू जहिले पनि राख्न सक्छौं ग्राहक। यदि सबै कुरा हामी चाहानुहुन्छ भने, हामी ठीक क्लिक गर्छौं र जानकारी देखा पर्दैन:
के यो मूल रूप मा हामीलाई भन्दै छ के एक पटक रेकर्डि process प्रक्रिया रोक्न को लागी एक पटक मात्र थिचेर शुरू हुन्छ Ok। जब हामी यो गर्छौं हामी एक टर्मिनल प्राप्त गर्नेछौं (Xterm) जुन हामीले बढाउनु पर्छ यदि हामी यसलाई रेकर्डिंगमा देखा पर्न चाहँदैनौं 😀 र समाप्त गर्नका लागि, हामी केवल पत्र «Q«। भिडियो हाम्रो मा बचत हुनेछ / घर.
सरल? यदि हामी स्थापनाकर्तालाई फेरि चलाउँछौं भने, यसले के गर्छ यसले सम्पूर्ण स्क्रिप्टको स्थापना रद्द गर्दछ।
आउनुहोस्, भनेको छ कि सुन्दर स्क्रीनकास्टहरू वा ट्यूटोरियलहरू सिर्जना गर्न 😀
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » तपाइँको डेस्कटप स्क्रिनकेप्चरको साथ रेकर्ड गर्नुहोस्
सबै पछि, यो स्थापना गर्न एक पीडा को एक बिट छ, तर मेरो डेस्कटप उही समस्या छ रेकर्ड, तपाईं अलग ग्राफिकल इन्टरफेस स्थापना गर्नु पर्छ।
मैले देखेको छैन कि स्थापना यति गाह्रो छ। वास्तवमा यो हेर्ने भन्दा छिटो छ। 😀
बन्शी २.०: GNU / Linux मा आईट्यून्सको नजिकको चीज